YEYINTNGE(CANADA): Saturday, November 17
မြန်မာနိုင်ငံဧ။် ရှားရှားပါးပါး ရတောင့်ရခဲ အချိန်ကလေး
by Thanda Win on Saturday, November 17, 2012 at 2:18am ·
* ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းဆောင်ဟာ ညနေစောင်းတာနဲ့ ဆူညံနေတတ်ပါတယ်။ ဧည့်ခန်းမထဲမှာ ဥဒဟိုလှည့်ပတ်သွားနေကြတဲ့ တရုတ်လူမျိုး၊ ဂျပန်လူမျိုး၊ ဥရောပသား၊ အမေရိကန်လူမျိုးတွေဟာ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် များလှပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ မြန်မာ့စီးပွားရေး ရုတ်တရက်ဖွံ့ဖြိုးလာမှာကို ဒီနေရာက စောင့်နေကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
* မြန်မာအစိုးရကဆောင်ရွက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်တာ မဟုတ်ပေမယ့် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အမေရိက ခရီးစဉ်မှာ အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ဘ၀မှ အသွင်ပြောင်းလာခဲ့တဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုလည်း သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
* ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကတည်းက နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ၀င်လိုက် ထွက်လိုက်ဖြစ်နေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နယ်ဆင်မင်ဒဲလားကို နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုနေကြတာ အံကိုက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မင်ဒဲလားဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ပေးချင်ပေမယ့် အတွင်းကျကျပြောင်းလဲဖို့ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်နေတဲ့ သမ္မတ ဒီကလပ်ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖို့ လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သတ္တိရှိပြီး တာဝန်သိတဲ့လူတွေဟာ မတရားမှုတွေကို ကမ္ဘာတလွှားမှာ တိုက်ထုတ်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်ကလေးကတော့ သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်သူအာဏာရှင်တို့ရဲ့ဆန္ဒ ထပ်တူကျနေတဲ့ ရတောင့်ရခဲ ရှားရှားပါးပါး အချိန်ပါပဲ။
* မြန်မာခေါင်းဆောင်တော်တော်များများနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက် ဦးသိန်းစိန်ဟာ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း ကျွန်တော်တို့ သိလာပါတယ်။ ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ တိုင်းပြည်တွေမှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ တော်လှန်ရေးပုံစံမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ သေသေချာချာတွက်ချက်ထားပြီး အနှစ်သာရရှိတဲ့ အတွင်းပိုင်းက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်မှာတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ နှေးနှေးမှန်မှန်နဲ့ အစိုးရရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ဆောက်ရပါမယ်။ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲလိုသူတွေက မတားဆီးနိုင်အောင် လုပ်ရပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြွယ်ဝလှတဲ့ သယံဇာတတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး မထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ အခြားတဖက်မှာလည်း လူထုက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ခံစားနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ရပါဦးမယ်။ ဒီလိုအောင်မြင်မှုဟာ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့ အနီးကပ်ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်မှာ အများကြီးတည်မှီနေပါတယ်။
* တကယ်လို့များ လူထုက ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပြောင်းလဲရေးတွေရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကို မခံစားရဘူးဆိုရင် ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ကျဆုံးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ လမ်းစကိုသာတွေ့သေးတယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ဖြတ်သန်းရဦးမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
* ပြည်သူလူထုအများစုက အလွန်ဆင်းရဲကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို မြှင့်တင်ဖို့ဆိုတာ အစိုးရ၊ အတိုက်အခံပါတီ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ စသဖြင့်အားလုံးပါဝင်မှသာဖြစ်နိုင်ပါမယ်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ရေး၊ စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်ရေးတို့ဟာ မြန်မာလူထုကော နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကပါ စွမ်းစွမ်းတမံခွန်အားစိုက်ထုတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့သလို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင်ပေါများစေမယ့် လုပ်ငန်းများဟာ ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ရပါမယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရေအရင်းအမြစ်နဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအတွက် အခြေခံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြသနာတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပြေလည်မှုတွေကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသေးတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေက ဒီအပြောင်းအလဲမှာ သူတို့ပါဝင်တယ်လို့ မခံစားရဖူးဆိုရင် ဒီပြောင်းလဲမှုတွေဟာ အလကားဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
* ဒုတိယအချက်ကတော့ အစိုးရဟာ ဘယ်လိုစနစ်တကျ အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာကို မသိပါဘူး။ အခြေခံ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဗဟုသုတကို မရှိနေတာပါ။ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးနဲ့ ဥပဒေပြုရေးအဖွဲ့တွေဟာ ပြည်သူတွေကို ၀န်ဆောင်မှုပေးဖို့ အရည်အချင်းမပြည့်တော့ပါဘူး။ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ သူတို့ဟာ စံနှုန်းတွေ၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို လေ့လာသင်ယူဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်။ အခြေခံလေးတွေဖြစ်တဲ့ ဥပဒေကြမ်းဆွဲဖို့၊ ဘတ်ဂျက်ဆွဲဖို့၊ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အစည်းတွေ ထူထောင်ဖို့၊ ပါတီအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ဖို့၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ဘယ်လိုအပေးအယူဆောင်ရွက်ရမယ် ဆိုတာတွေကို သင်ယူရပါမယ်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရမယ့် အစိုးရတခုအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကလည်း ရှိမနေပါဘူး။ လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေမှာ ၀န်ထမ်းတောင်မရှိပါ။
* အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီထူထောင်ရေး ပညာရှင်အဖွဲ့များဟာ အပြည့်အ၀လုပ်ငန်းစသင့်နေပါပြီ။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး အဖွဲ့တွေအတွက်ကော နိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက်ပါ သင်တန်းတွေ အမြန်ဆုံးလိုအပ်နေပါတယ်။
* တတိယအချက်ကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးပေါ်ဗျုဟာတွေ မချမှတ်ထားပါဘူး။ ဒါကြောင့် အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ နှောင့်နှေးနေပါတယ်။ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို တရားဝင်ဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သက်ရောက်မှုတွေ အများကြီးကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ အီဂျစ်နဲ့တူနီးရှားတို့လိုပဲ မြန်မာဟာ အမေရိကန် အင်တာပရိုက်စ် ရန်ပုံငွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက မြန်မာပြည်သူတွေကို အမေရိကန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးစေပြီး အမေရိကန် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေကိုလည်း တိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။
* အမေရိကန်သာမရှိရင် တရုတ်ပြည်က အကုန်ယူသွားမှာပါပဲ။ ဒါဆို စီးပွားရေးအခွင့်အရေးတွေလည်းဆုံးရှူံးမယ်။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ သြဇာသက်ရောက်မှုကိုလည်း လက်လွှတ်ရပါလိမ့်မယ်။
* ဒါအချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့အချိန်ကောင်းပါပဲ။ နိုင်ငံရေးအမြင်တွေမတူခဲ့ကြတဲ့ သက်တမ်းရှည်ပြိုင်ဘက်များဟာ အခုတော့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကို အကောင်းဆုံးသွားနိုင်ဖို့ ခြေလှမ်းတူနေကြပါပြီ။ ထောင်ကျခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကလည်း တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ရှေ့ရှူပြီး ထောင်ချခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့အတူ ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့ပြောချင်တာတွေကို နားထောင်ပြီး သူတို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖက်လှဲတကင်း အားပေးဖို့သင့်ပါပြီ။
* ဒီနေရာမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေခံနေရဆဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေ၊ အထူးသဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကို အမေရိကန်က ပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်း ပြောပြစရာတွေ အများကြီးကိုရှိနေပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို စံနမူနာပြအဖြစ် ထားနိုင်ပါတယ်။
( ဘေလ် ရစ်ချတ်ဆန်ဟာ ကုလသမ္မဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ နယူးမက်ဆီကိုပြည်နယ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မစ်ကီဘာဂ်မန်းကတော့ ရစ်ချတ်ဆန်အဖွဲ့ရဲ့ အကြီးတန်းအကြံပေးဖြစ်ပါတယ်။ )
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/17/20120အကြံပြုခြင်း
web cam ကိုခြေမ နဲ့ ခြေညှိုးကြားမှာညှပ်ပြီး .......
မနေ့က ကျွန်တော် အင်တာနက် သုံးဖို့ဆိုင်ကိုသွားတယ်...ကြည့်မြင်တိုင်ဘက်က ဆိုင်တစ်ပေါ့ဗျာ.... ဆိုင်လေးက တော်တော်သန့်တယ်... ဆိုင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရော ... သုံးထားတဲ့အရောင်တွေရော... မိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ ဒီလိုနဲ့သုံးနေရင်း နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ကျွန်တော့်ဘေးစက်ကိုလူတစ်ယောက် လာသုံးတယ်ဗျ.... သူဟာသူသုံးလိုက် ဆိုင်မှာရှိတဲ့သူနဲ့သိတဲ့ ကောင်လေးတွေကို သူသုံးနေတဲ့စက်ကိုခေါ်ပြလိုက်နဲ့..... အော်ကျယ်အော်ကျယ်နဲ့ပေါ့.... ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်အာရုံနဲ့ ကိုယ်မို့လို့သူ့ကို ပထမတော့သတိမထားမိဘူး.... နောက်တော့ ကိုယ့်ဆရာကဘယ်ဟုတ်မလဲဗျ ... vzo ကိုဖွင့်ပြီး web cam ကိုသူ့ခြေမ နဲ့ ခြေညှိုးကြားမှာညှပ်ပြီး အောက်ကနေ ရှေ့ကကောင်မလေးတွေကိုကြည့်နေတာကိုဗျ.... ကောင်မလေးတွေက စကပ်တိုလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ကိုယ့်ဆရာသမားက အကြိုက်တွေ့နေတော့တာပဲ....ဓါတ်ပုံတွေလဲရိုက်လိုက်တာတဖျပ်ဖျပ်နဲ့..... နောက်တော့ ကောင်မလေးတွေပြန်သွားတယ်... ကျွန်တော်လည်းသူ့ကို သတိထားလိုက်မိတယ်... သူလုပ်တာကို ကိုယ်ကမြင်နေပေမယ့် ဟိုကောင်မလေးတွေက လုံးဝမသိဘူး... နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ကောင်မလေးကတော့ ထမီတွေနဲ့ဆိုတော့ ငနဲကတွက်ချေမကိုက်တော့ဘူး... နောက်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကို သေချာဘုရှိုးရှိုးလိုက်တယ်... ခဏကြာတော့ငနဲထလစ်သွားတယ်... ဒီဘဲက အင်တာနက်တောင်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်သုံးတတ်တာမဟုတ်ဘူး....ဘာ web site မှကြည့်တာမဟုတ်ဘူး... vzo ကို full screen လုပ်ပြီးကြည့်တာ....vzo ကိုလည်းဆိုင်ကကောင်လေးတွေကိုဖွင့်ခိုင်းပြီးသုံးတာ... ဥာဏ်တော့ တော်တော်ကောင်းပဲ.... ကျွန်တော်လည်းယောကျာ်းလေးပါ... ဒါပေမယ့် ဒီဘဲလုပ်ပုံက တော်တော်အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရပ်ပဲ... ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမလေးတွေလဲ သတိထားလို့ရအောင် သိထားအောင်လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်နော်
မနေ့က ကျွန်တော် အင်တာနက် သုံးဖို့ဆိုင်ကိုသွားတယ်...ကြည့်မြင်တိုင်ဘက်က ဆိုင်တစ်ပေါ့ဗျာ.... ဆိုင်လေးက တော်တော်သန့်တယ်... ဆိုင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရော ... သုံးထားတဲ့အရော...
င်တွေရော... မိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ ဒီလိုနဲ့သုံးနေရင်း နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ကျွန်တော့်ဘေးစက်ကိုလူတစ်ယောက် လာသုံးတယ်ဗျ.... သူဟာသူသုံးလိုက် ဆိုင်မှာရှိတဲ့သူနဲ့သိတဲ့ ကောင်လေးတွေကို သူသုံးနေတဲ့စက်ကိုခေါ်ပြလိုက်နဲ့..... အော်ကျယ်အော်ကျယ်နဲ့ပေါ့.... ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်အာရုံနဲ့ ကိုယ်မို့လို့သူ့ကို ပထမတော့သတိမထားမိဘူး.... နောက်တော့ ကိုယ့်ဆရာကဘယ်ဟုတ်မလဲဗျ ... vzo ကိုဖွင့်ပြီး web cam ကိုသူ့ခြေမ နဲ့ ခြေညှိုးကြားမှာညှပ်ပြီး အောက်ကနေ ရှေ့ကကောင်မလေးတွေကိုကြည့်နေတာကိုဗျ.... ကောင်မလေးတွေက စကပ်တိုလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ကိုယ့်ဆရာသမားက အကြိုက်တွေ့နေတော့တာပဲ....ဓါတ်ပုံတွေလဲရိုက်လိုက်တာတဖျပ်ဖျပ်နဲ့..... နောက်တော့ ကောင်မလေးတွေပြန်သွားတယ်... ကျွန်တော်လည်းသူ့ကို သတိထားလိုက်မိတယ်... သူလုပ်တာကို ကိုယ်ကမြင်နေပေမယ့် ဟိုကောင်မလေးတွေက လုံးဝမသိဘူး... နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ကောင်မလေးကတော့ ထမီတွေနဲ့ဆိုတော့ ငနဲကတွက်ချေမကိုက်တော့ဘူး... နောက်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကို သေချာဘုရှိုးရှိုးလိုက်တယ်... ခဏကြာတော့ငနဲထလစ်သွားတယ်... ဒီဘဲက အင်တာနက်တောင်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်သုံးတတ်တာမဟုတ်ဘူး....ဘာ web site မှကြည့်တာမဟုတ်ဘူး... vzo ကို full screen လုပ်ပြီးကြည့်တာ....vzo ကိုလည်းဆိုင်ကကောင်လေးတွေကိုဖွင့်ခိုင်းပြီးသုံးတာ... ဥာဏ်တော့ တော်တော်ကောင်းပဲ.... ကျွန်တော်လည်းယောကျာ်းလေးပါ... ဒါပေမယ့် ဒီဘဲလုပ်ပုံက တော်တော်အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရပ်ပဲ... ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမလေးတွေလဲ သတိထားလို့ရအောင် သိထားအောင်လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်နော်...
အိုဘားမား ဂရပ်ဖစ်တီ ၂၄နာရီ အစောင့် ချ
Freedom News Group(Burma)အာကာ ကျော် ရေး ဆွဲ သည့် အိုဘားမား ကို ကြိူ ဆိုသည့် ဂရပ်ဖစ်တီ ကို
ဖျက် လို ဖျက် ဆီး လုပ် သူ များ အန္တရာယ် မှာ ကင်းဝေး ရန် အတွက် ရဲဝန်ထမ်း များ ကို ၂၄နာရီ အစောင့် ချ ထား သည် ကို ဤ သို့တွေ့ ရသည်။
ထိုနေရာကို တာဝန် ကျ ရဲ မှုး က တစ်နာ ရီ တစ်ခါ လာစစ် ပြီး ပြီး ခဲ့ သည့် ရက် ပိုင်း အတွင်း က အနီး ရှိ ကွမ်းယာ ဆိုင် တွင် ချဲ နံ ပါတ် ပေါက် ဂဏန်း သွား မေး မိသည့် တာဝန်ကျ ရဲဝန်ထမ်း တစ်ဦး မှာ တာဝန် လစ် ဟင်း မှု ဖြင့် တစ်ရက် ချုပ် ခံ ရသည် ဟု FNG မှ သတင်း ရရှိသည်။
အိုဘားမား Graffiti ပုံကို ဆွဲတဲ့ အသက်၂၀ သာရှိသေးသည့် အာကာကျော်နှင့် တွေ့ဆုံခန်း၊ လမ်းတွေကို မိတ်ကပ်လိမ်း ပန်းပန် တက်သုတ်ရိုက်လုပ်နေတဲ့ ၇န်ကုန်
Myanmar NAVY's Photos
၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်လာတော့မည့် 98B
rBy mmweather.ygn, on November 17th, 2012
နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ မုန်တိုင်းဖြစ်လာတော့မည့် 98B သည် လပွတ္တာမြို့ အနောက်ဘက် ၃၉ဝ မိုင်ခန့်၊ ကျောက်ဖြူမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃၈ဝ ခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ West Bengal ပြည်နယ်၊ Kolkata မြို့တောင်ဘက် မိုင် ၄၄ဝ ခန့်နှင့် သြရိသပြည်နယ်(Odisha) Bhubaneswar မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် ၃၄၅ မိုင်ခန့်တွင် တည်ရှိနေပြီး အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ 98B ၏ ဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း ၃ဝ နော်တီကယ်မိုင် (တစ်နာရီ ၃၄.၅၂ မိုင်) နှုန်းရှိနိုင်ပြီး၊ ဖိအား 1000 hPa သို့ ကျဆင်းလျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပြီ လွန်ခဲ့သည် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်မြေက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၆ မိုင်ခွဲနှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ကြံခိုင်ရေးပါတီ ပြိုကွဲလု နီးပြီလော
by ပလေတို ဒီမို on Thursday, November 15, 2012 at 2:45am · (Foreign Policy မဂ္ဂဇင်းတွင် ဆောင်းပါးရှင် လယ်ရီဂျာဂင် ရေးသားသည့် Coming Apart at the Seams ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်)
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ အတိတ်ကာလက သတင်းများသည် ဒီမိုကရက်တစ်အတိုက်အခံများ အင်အားကောင်းလာခြင်းနှင့် အစိုးရအား စိန်ခေါ်ရန်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများ အကြောင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေခြင်းမှာလည်း နားလည်နိုင်စရာ ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် တကမ္ဘာလုံးက အသိအမှတ်ပြုထား သည့် တစ်ဦးတည်းသော မြန်မာနိုင်ငံရေးသမား အောင်ဆန်းစုကြည်က အတိုက်အခံများကို ခေါင်းဆောင် နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လစ်ဘရယ်ဖြစ်ရေးကြိုးစားမှုကို ပိုမိုကြီးမားစွာ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့် နောက်ထပ်ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာစရာ တစ်ခုလည်း ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဏာရပါတီဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် ပြိုကွဲလုနီးနီး ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၄င်းတို့ ၏ နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေး သြဇာအာဏာ လျော့ကျသွားမည်ကို ကြောက်ရွံ့ကြသဖြင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆန့်ကျင်ကြသော ကွန်ဆာဗေးတစ်များနှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အကြား ပြင်းထန်သော အာဏာလွန်ဆွဲပွဲသည် မဖုံးနိုင်မဖိနိုင် ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ပုံဖျက်ဖုံးကွယ်ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ကာလကြာရှည်စွာ လွှမ်းမိုးထားခဲ့သော ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပြိုကွဲသည့် သတင်းကို မြန်မာအများအပြားက ကြိုဆိုကြမည်ကို သံသယရှိစရာမလိုပါ။ သို့သော်လည်း တကယ်တမ်း တွင်မူ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကွဲခြင်းသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကို ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးသာ သက်ရောက်ဖွယ် ရှိပါသည်။
လက်ရှိအာဏာလွန်ဆွဲပွဲမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း တို့အကြားတွင် ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား ပါတီဥက္ကဌအဖြစ် ပြန်လည် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီကိုဦးဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် ယခုညီလာခံ၌ ဦးရွှေမန်းကို ပါတီ ဥက္ကဌတာဝန်ပေးလိမ့်မည်ဟု လေ့လာသူအများအပြားက မျှော်မှန်းထားသဖြင့် ဦးသိန်းစိန်အား ပါတီဥက္ကဌ အဖြစ် ပြန်လည် ရွေးချယ်မှုသည် အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အမှန်တစ်ကယ်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဦးရွှေမန်းအား အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အရာရှိကြီးတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဦးရွှေမန်းမှာ ပိုမိုငယ်ရွယ်တက်ကြွပြီး ဦးသိန်း စိန်မှာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ပြီး ကျန်းမာရေးလည်း မကောင်းလှသဖြင့် ဦးသိန်းစိန် ပါတီဥက္ကဌတာဝန် ဆက်ယူခြင်းသည် ပြဿနာများကို ငြိမ်သက်စေရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးပါသည်။ ဦးရွှေမန်းက ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို ၄င်းအနေဖြင့်ထောက်ခံကြောင်း ပြောကြားသော်လည်း သူသည် သမ္မတအပေါ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဃာတ ကြီးမားပြီး(ယခုဦးသိန်းစိန်က ပါတီဥက္ကဌရာထူးကို ဆက်ထိန်းထားသဖြင့် ထိုအာဃာတ ပိုမိုကြီးမားလာမည် ဖြစ်သည်) ထိုသို့ အာဃာတထားခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအဖြစ် တိုးတက်လာမည့်အရေးကို ဟန့်တားလိုကြသော ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်မှ ရှေးရိုးစွဲ ကွန်ဆာဗေးတစ်များနှင့် ဦးရွှေမန်း ပေါင်းစည်းမိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကွန်ဆာဗေးတစ်များက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေ့သို့ဆက်လက်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် နိုင်ငံစီးပွားရေးအား ၄င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကို လုံးဝ ပျက်သုန်းသွားစေလိမ့်မည်ဟု စိုးရိမ်ပူပန်နေ ကြပါသည်။ (ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီက အပြတ်အသတ် အနိုင်ရလိုက်ခြင်းက ၄င်းတို့ကို လုံခြုံမှုမရှိတော့ဟု ခံစားရစေပါသည်)
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အယောင်ဆောင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီတွင် စတင် ကျင်းပခဲ့သော ပါလီမန်က အတည်ပြုခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်ပါသတ်မှတ်ချက်များကလည်း မတည်ငြိမ် မှုများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေမည့်ပုံရှိပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅% မှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ခန့်အပ်သော တပ်မတော်သားများဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိကာလတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီသည် လွှတ်တော်တွင် နေရာ ၆၀% ကျော်ရရှိထားပါသည်။ သို့သော် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီသာ ပြိုကွဲသွားပါက အုပ်စုငယ်များစွာအဖြစ်ကွဲထွက်သွားနိုင်ခြေရှိပြီး ထိုသို့ ကွဲသွားလျှင် လွှတ်တော်အတွင်း တပ်မတော်သည် အင်အားအကောင်းဆုံးအုပ်စုဖြစ်လာမည် ဖြစ်ပြီး တပ်မတော်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်များကို ဗီတိုအာဏာ သုံးနိုင်လာမည် ဖြစ်သည်။ ပါတီများ အစိတ်စိတ်ကွဲနေသော လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များသည် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လာ နိုင်ပြီး တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍကို ရှေ့တန်းတင်လာကာ လုံခြုံရေးကို ထိပ်တန်းဦးစားပေး ဖြစ်လာ နိုင်ပါသည်။ အချို့ကမူ ပေါ်လစီရေးရာများတွင် တပ်မတော်ကချုပ်ကိုင်ထားသည့် `အပျော့စား အာဏာ သိမ်းမှု’ (soft coup) ဖြစ် လာနိုင်သည့် အလားအလာရှိသည်ဟု အချို့ကဆိုပါသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ အားနည်းချက်မှာ ၄င်း၏သမိုင်းကြောင်းအပေါ် အခြေခံနေပါသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီအား နိုင်ငံအား အုပ်ချုပ်နေသည့် တပ်မတော်က ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသည့် နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် ယခင်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း ပထမဆုံး အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွင် တပ်မတော်သားဟောင်းများ၊ ၀န်ကြီးများ၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းများ၊ စီးပွားရေးသမားများ ပါဝင်ကြပါသည်။ ၄င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တပ်မတော်သည် နိုင်ငံရေးတွင် ဆက်လက် လွှမ်းမိုးရေးမှ လွဲ၍ အခြားသော နိုင်ငံရေးခံယူချက်ဟူ၍ မရှိခဲ့ပါ။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအနေဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအား ခိုင်မာစွာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီး စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး လူထုအကျိုးကို ရည်ရွယ်သည်ဆိုသော တိတိကျကျမရှိလှသည့်မူဝါဒမှအပ သင့်တော် မှန်ကန်သည့် မူဝါဒချမှတ်ရန် အခက်တွေ့နေပါသည်။ အရေးပါသောနေရာများတွင် ယခုတိုင် ပါဝင် နေဆဲဖြစ်သည့် စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းများပါဝင်မှုသည်လည်း ပါတီအတွက် ပြဿနာဖြစ်ပါသည်။ ပညာ တတ်ပြီး အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သော သံအမတ်ကြီးများ၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းဟောင်းများ နှင့် ပညာတတ် များသည် အာဏာရှင် ဆန်သူများ၊ အဂတိလိုက်စားသည့်ဝန်ကြီးဟောင်းများနှင့် အတူတွဲပြီးလုပ်ရသည်ကို စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေကြပါသည်။
သမ္မတနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြားတင်းမာမှုများသည် နောက်ပိုင်းတွင်ပိုမို ပွင့်လင်းလာ ပါသည်။ လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီးသော ဥပဒေများသည် သမ္မတ၏ အတည်ပြုချက်ရယူရန်မလိုဘဲ ချက်ချင်း အတည်ဖြစ်ရမည်ဟု ဦးရွှေမန်းက ပြီးခဲ့သည့်လဆန်းပိုင်းတွင် ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ၄င်းသည် သမ္မတနှင့် သူ၏၀န်ကြီးအဖွဲ့ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဌက လက်တွေ့ကျကျ စစ်ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု လေ့လာသူ အများအပြားက ရှုမြင်ကြပါသည်။
အောက်တိုဘာလလယ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံတွင် ဦးရွှေမန်း၏ လုပ်ပုံကလည်း ပဋိပက္ခကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ပါတီ ဥက္ကဌ အဖြစ် ရွေးချယ်ခံထားပြီး ပါတီအကြီးအကဲဖြစ်သော်လည်း `ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ညီလာခံကျင်းပဖို့နဲ့ ပါတီကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့ ကျွန်တော့်မှာတာဝန်အရှိဆုံးပါ´ ဟု ထိုညီလာခံတွင် ဦးရွှေမန်းက ပါတီဝင်များ ကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ `ဒီလိုပြောတာကတော့ သမ္မတကြီးမျက်နှာကို ဖြတ်ရိုက်တာပဲ၊ ဒီလိုပြောခြင်းဟာ ပါတီကို သူထိန်းချုပ်ထားတာလို့ စိတ်ကြီးဝင်ပြီး ပြောခြင်းပဲ´ ဟု ပါတီနှင့် အနီးကပ်ဆက်ဆံနေသည့် စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးက မိမိကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်မှာ သမ္မတနှင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြား ပဋိပက္ခ အများအပြားအနက်မှ နောက်ဆုံး တစ်ခု သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ (အမြင်သာဆုံးမှာ စက်တင်ဘာလအတွင်းက အခြေခံဥပဒေခုံရုံးပြဿနာဖြစ်ပြီး ထိုကိစ္စမှာ ဦးရွှေမန်းက လွှတ်တော်၏အာဏာကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ရန်ကြိုးစားမှု၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ဖြစ် သည်)။ ထိုကိစ္စသည် ဦးရွှေမန်းအနေဖြင့် သမ္မတဖြစ်ရန်အကြံကို ပြနေကြောင်း၊ ဦးရွှေမန်းသည် ဒီမို ကရက်တစ်အရေခြုံ ထားသည့် ၀ံပုလွေဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၅ တွင် သမ္မတဖြစ်ရန် အခွင့်အလမ်းကို စောင့် နေသူဖြစ်ကြောင်း သမ္မတနှင့် နီးစပ်သည့် အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အာဏာပြိုင်ဆိုင်မှုမှာ ပိုမိုပြင်းထန်လာဖွယ်ရှိပါသည်။ သမ္မတသည် အစိုးရနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ဆောင်ရန် စီမံထားပြီး ပါတီတွင်းမှ ၀န်ကြီးဟောင်းများကို ပစ်မှတ်ထားဖွယ် ရှိပါသည်။ ၀န်ကြီးဟောင်းအချို့သည် ပြီးခဲ့သည့် ပါတီညီလာခံတွင် ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်များအဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းပင် ခံခဲ့ရသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် မကြာသေးမီကမှ ၀န်ကြီးအဖွဲ့ကို အကြီးအကျယ် အပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့ပြီး အရပ်သားနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအများအပြားကို ဒုဝန်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အစိုးရအတွင်း သတင်းအရ အပြောင်းအလဲများဆက်လုပ်နေသော်လည်း သမ္မတအနေဖြင့် အားလုံးကို ချက်ချက်ဖြုတ် မပစ်နိုင်ပါ။ အဓိကပြဿနာမှာ သဘောထားတင်းမာသူများသည် လွှတ်တော်အတွင်း အင်အားကောင်းကောင်းဖြင့် ရှိနေပြီး ၄င်းတို့သည် ပြီးခဲ့သည့်အစိုးရဟောင်းကာလတွင် ရှာဖွေစုဆောင်း ထားခဲ့သော ငွေကြေး အမြောက်အများကို ထ်ိန်းချုပ်ထားနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည့်(သစ်လုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင်၊စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း) စသော ဌာနများကို ကိုင် တွယ်ခဲ့ပြီး အကြီးအကျယ် ချမ်းသာခဲ့ကြသော အရာရှိကြီးများသည် ယခုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပစ်မှတ် ထားခံနေပါသည်။
အစိုးရအရာရှိများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းကို လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး ကော်မတီဥက္ကဌ ဦးအောင်သောင်းကဲ့သို့ ပါလီမန်အတွင်းမှ ဦးရွှေမန်း၏ မဟာမိတ်များက တားဆီး ကြပါသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်းနှင့် မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း ၀န်ကြီး ဌာန ၀န်ကြီး ဦးမောင်မောင်သိန်း၏ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို မကြာမီ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း အစိုးရက ထုတ်ပြန်သွားရန် စီစဉ်နေပါသည်။ ငါးလုပ်ငန်းမှ ရရှိသော သတင်းများအရ ဦးမောင်မောင်သိန်းသည် တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာသန်း ၈၀ ကျော်ကို သူ၏ ငွေစာရင်းထဲ ပြောင်းထည့်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံအနေဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် အခွန်ငွေ ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလာဒ်များသည် ဦးရွှေမန်း၏ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ဦးရွှေမန်းအနေဖြင့် ပါတီအတွင်း တိုးတက်လာနေသော ဖိအားပေးမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း လူဟောင်းကြီးများကမူ သမ္မတ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဝေးဝေးနေလိုကြဆဲ ဖြစ်ပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို ၄င်းတို့၏အခြေခံစခန်းအဖြစ် သုံးနေကြပါသည်။
လွှတ်တော်က ပြီးခဲ့သည့်အပတ်တွင် အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး သမ္မတက ချက်ချင်း လက်မှတ်ရေးထိုး ပေးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဥပဒေသစ်သည်လည်း သမ္မတနှင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြား ပြိုင်ဆိုင်မှုများကို ထင်ဟပ်နေပါ သည်။ ဦးရွှေမန်းသည် ပြည်တွင်းစီးပွားရေုးလုပ်ငန်းများအား ကာကွယ်ပေးသည့်မူဝါဒဖြင့် ပြည်တွင်းစီးပွား ရေးသမားများ၏ ထောက်ခံမှုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ ဦးသိန်းစိန်ကမူ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှပ်နှံမှုများကို ပိုမို တံခါးဖွင့်ထားသည့် ဥပဒေကို အသားပေးခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် သမ္မတက အနိုင် ရခဲ့ပါသည်။
`နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဥပဒေဟာ အရေးကြီးပြီး ၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် မလွှဲမသွေ လိုအပ်ပါတယ်´ ဟု သမ္မတ၏ နိုင်ငံရေးအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်က မိမိကို မကြာ သေးမီက ပြောခဲ့ပါသည်။ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အရေးနိမ့်မည့်အရေးမှ ရှောင်လွှဲနိုင်ရန်အတွက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိရေး ကတိ က၀တ်များ မဖြစ်မနေ ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးသိန်းစိန်နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင်များ သိကြ ပါသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်များ နောက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်လာသည်နှင့်အမျှ ပါတီအား ထိန်း ချုပ်ရေး တိုက်ပွဲမှာလည်း ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ပါသည်။ လူထုအမြင်တွင် ၄င်းတို့သည် NLD ပါတီအား အရေးနိမ့်နေသည်ကို ၄င်းတို့ကောင်းစွာသိထားပါသည်။ ယခင်က သမ္မတသက်တမ်းတစ်ကြိမ်သာ တာဝန်ထမ်းဆောင် မည်ဟု ကြေညာခဲ့ဖူးသော သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပေါ်တွင် ဖိအားများ များပြားနေပြီး ပါတီခေါင်းဆောင် တာဝန်ဆက်ယူကာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဒုတိယသက်တမ်း တာဝန် ထမ်းဆောင် မည်ဆိုသည်မှာ ထိုအကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ပြဿနာများကို ကုစားရန် နည်းနည်းသာထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
BY LARRY JAGAN | NOVEMBER 12, 2012
But the president is elderly and ailing, while Shwe Mann is comparatively young and vigorous -- meaning that Thein Sein's retention of the top party post has done little to calm the troubled waters. While Shwe Mann says he approves of the reforms, he hasadeep personal antipathy toward the president (now compounded by Thein Sein's move to retain the leadership of the USDP), and this has led him to join forces with the many conservatives who, behind the scenes, are desperate to prevent Burma's progress toward democracy. Above all, they are anxious that further liberalization could jeopardize their control over the country's economy. (The fact that the pro-government forces were trounced by the NLD in last April's parliamentary election probably hasn't made them feel any more secure.)
The sense of instability is aggravated by the rules of Burma's political game, which were laid out by the new constitution rammed throughasham referendum (2008) and then ratified by the parliament when it convened in Jan 2011. According to the constitution, 25 percent of the seats in the parliament are reserved for serving soldiers, who are essentially appointed to the assembly by the army chief.
Currently the USDP, with more than 60 percent, holds the overwhelming majority of the seats in parliament. But if the party fragments, it is likely to break up into several smaller groups, leaving the military with the largest single bloc -- and thus potentially giving it effective veto power over planned reforms. A parliament of fractured parties might see soldiers takingamore active role, probably by stressing core military values and putting security as the top priority. Some have even warned of the potential fora"soft coup" that would put the military back in charge of policy.
The reasons for the USDP's underlying weakness lie in its history. The party was formed by the country's former dictator, General Than Shwe, out of the old political movement of the ruling military back in 2010. This opened the way for the USDP to compete in the first general election in 20 years, also held in 2010. The USDP's members areamix of former military men, ministers, civil servants, and businessmen. Its main purpose was to ensure the military's continued dominance, but aside from that it has no real ideology to hold its disparate constituents together.
Shwe Mann's move exacerbated the conflict within the party-- especially during the USDP's first national congress in mid-October. "To elaborate, I am the one who is mostly responsible for convening the convention and reorganizing the party," Shwe Mann told party members at the time, even though Thein Sein had been elected as the party chairman and was obviously in charge. A Burmese businessman with close ties to the USDP told me. "It wasaslap in the president's face, and his declaration that he controlled the party [was] sheer arrogance."
That was only the latest inaseries of other conflicts between the two men (including, most notably,afight in September overaconstitutional tribunal that Shwe Mann had set up as part of his efforts to boost parliamentary powers at the expense of the president's). In the end those plans went nowhere. But one government official close to the president told me that the episode demonstrated the extent of Shwe Mann's designs on the presidency. Shwe Mann, he said, was "a wolf in democratic clothes, waiting to pounce for the presidency in 2015." (The next general election is set for November 10, 2015.)
The investigations into the officials' activities have been blocked by Shwe Mann's allies in parliament, such as the chairman of the finance and banking parliamentary committee, Aung Thaung. In the next few weeks, the government is preparing to release the results of its investigation into the activities of Maung Maung Thein,aformer fisheries minister and ex-general secretary of the USDP. Sources in the fishing industry say that he will be accused of siphoning off more than $80 millionayear into his private coffers, and depriving the country of some $200 million dollarsayear in lost taxes.
The outcome of the investigation could haveabig impact on the fate of Shwe Mann's political ambitions. But while Shwe Mann is facingagrowing hornets' nest in the party itself, the old guard is still out to disrupt the president's reform process, using the USDP as their base.
"Everyone knows the foreign investment law is critical and that it is desperately needed for the country's economic development," Ko Ko Hlaing, the president's top political adviser, told me recently. Thein Sein and the USDP leaders know that they have to deliver on their economic promises if they are to avoid losing to Aung San Suu Kyi's National League for Democracy (NLD) at the next elections.
The battle for control of the USDP is set to become even messier as the party's members prepare for the next elections. They know only too well that, in the court of public opinion, they are rapidly losing ground to the NLD. For that reason there is now mounting pressure on Thein Sein -- who had earlier declared himself to beaone-term president -- to stay on as party head and serveasecond term as the country's leader. But that will probably do little to fix what ails the USDP.